गएको वर्ष ७५३ जनाले वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाए
काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानिएको छ । मुलुक धान्न परदेशिएका मध्ये वर्सेनि सयौंले ज्यान गुमाउँछन् । यो वर्ष ७५३ ले विदेशमै ज्यान गुमाए । ३३५ जना अंगभंग भएर फर्के । त्यस्तै अंगभंग हुने पनि सबैभन्दा बढी पुरुष कामदारहरु छन्। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अंगभंग हुने ३ सय २३ पुरुष र १२ जना महिला कामदारहरु छन् । यो...
साउथ प्यासिफिक मुलुकहरुको भ्रमणमा अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री एकनाथ ढकालले साउथ प्याशिफिक क्षेत्रका विभिन्न मुलुकसँगको सम्बन्ध विस्तारमा क्रियाशील भएका छन् । नेता ढकालले नेपालदेखि टाढा रहेका तथा खासै कूटनीतिक आदानप्रदान नभइरहेका मुलुकहरुसँग निकटता बढाएका छन् । फिजी, सामोआलगायतका टापु मुलुकहरुको भ्रमण, जनस्तरका कार्यक्रमहरुलाई...
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा अफ्रिकी मुलुक केन्यामा पुगेका १२ जना नेपाली महिलाहरुलाई उद्धार गरी नेपाल ल्याई आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ । ती महिलाहरु केन्यामा पक्राउ परेको भन्ने बिभिन्न पत्रपत्रिका र सामाजिक सन्जालमार्फत समाचार फैलिएपछि नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरो, बबरमहलले निरन्तर फलोअप गरी...
केन्याको डान्स बारबाट उद्दारबाट उद्धार गरिएका १२ युवती काठमाडौं ल्याइयो
श्रावण ३ गते, काठमाडौं । केन्याको डान्स बारबाट उद्दार गरिएका १२ जना नेपाली युवतीलाई काठमाडौं ल्याइएको छ। बिहीबार साँझ केन्याबाट उनीहरुलाई हवाई मार्ग हुँदै नेपाल ल्याइएको हो। नेपाल प्रहरीको मानव बेचविखनविरुद्ध काम गर्ने ब्युरो स्रोतका अनुसार केन्या प्रहरीले चलाएको अपरेशनका क्रममा उनीहरु पक्राउ परेका थिए। त्यहाँबाट अन्त�...
मलेसियामा अवैध रुपमा बसेका विदेशी कामदारलाई मलेसिया सरकारले दियो आममाफी
क्वालालम्पुर । मलेसिया सरकारले अवैध रुपमा बसिरहेका विदेशी कामदारलाई आममाफीको घोषणा गरेको छ । उक्त आममाफी आगामी महिना (अगष्ट १) देखि डिसेम्वर ३१ सम्म हुने मलेसियाली अनलाइन द स्टार गृहमन्त्रालय उदृत गदै जनाएको छ । द स्टारका अनुसार मलेसियाको गृहमन्त्रालयले अवैध रुपमा बसेका आप्रवासी कामदारलाई आममाफीको समय दिएको हो । अवैधानिक रुपमा...
अमेरिकासँग वार्ता गर्न इरानको सर्तः सबै नाकाबन्दी फिर्ता हुनुपर्छ
एजेन्सी, तेहरान । इरानका विरुद्धमा लगाइएका सबैखाले नाकाबन्दी हटाए अमेरिकासँग वार्ताको टेबलमा बस्न तयार रहेको इरानी राष्ट्रपति हसन रौहानीले बताएका छन् । अमेरिकाले इरानका विरुद्धमा लगाइएका नाकाबन्दी हटाउँछ भने आफूहरु उनीहरुसँग वार्ताको टेबलमा बस्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामी सधैँ वार्ताकै पक्षमा हो र जुनसुकै समयमा...
कामदारका आफन्तलाई युएई भ्रमणमा कठिनाई
काठमाडौं । आफू युएईमा काम गरिरहँदा आफन्तलाई सो मुलुक घुमाउन चाहने नेपाली कामदारलाई समस्या हुने भएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)स्थित नेपाली दूतावासले कामदारका आफन्तकालागि दिँदै आएको नो अब्जेक्सन लेटर यहि असार ३० गतेदेखि नदिने सूचना जारी गरेको छ । मा कार्यरत नेपाली कामदारका आफन्तले भिजिट भिसाका लागि नो अब्जेक्सन लेटर नपाउने...
अब, युएईमा कार्यरत नेपालीका आफन्तले नो अब्जेक्सन लेटर नपाउने
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा कार्यरत नेपालीका आफन्तले भ्रमण भिसाका लागि नो अब्जेक्सन लेटर नपाउने भएका छन्। युएईका लागि नेपाली दूतावासले आइतबार सूचना जारी गरी यसअघि दूतावासले दिँदै आएको त्यस्तो लेटर आजदेखि नपाउने बताएको छ। दूतावासको सूचनामा भनिएको छ, ‘संयुक्त अरब इमिरेट्सको भिजिट भिसामा आउन चाहने संयुक्त अरब इमिरेट्समा कार्यरत...
अमेरिकामा बिजुली जाँदा हंगामा
एजेन्सी । आइतबार साँझ अचानक बत्ती गएपछि अमेरिकाको न्यूयोर्कमा हंगामा मच्चियो । कतिपय मानिसहरू ट्रेन तथा लिफ्टमै अड्किए, ट्राफिक व्यवस्था अस्तव्यस्त भयो । म्यानहटन क्षेत्रका ७० हजार घर तथा पसलहरूमा आध्यारो छायो। अन्तत: पाँच घण्टापछि लाइन आयो । आगलागीका कारण बत्ती गएको बताइए पनि प्रशासनले यसबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ...
देश शोकमा भएको बेला कुवेतमा पनि तीन नेपालीको निधन
काठमाडौं । कुवेतको एक अपार्टमेन्टमा आगलागी हुदा तीन नेपालीको मृत्यु भएको छ । सो अपार्टमेन्ट आप्रवासीहरु बस्ने रहेको बुझिएको छ । आगलागीमा मृत्यु हुनेमा सर्लाहीका विजय बैठा र अरु दुई जना महिला छन् । मृतक महिलाहरु अप्सरा कामी र गौरी दर्जीको नेपालको ठेगाना खुल्न नसकेको कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । सो अपार्टमेन्टमा शनिबार...
कुवेतको एक अपार्टमेन्टमा आगलागी हुँदा ३ नेपालीको पनि मृत्यु
असार २९, काठमाडौँ । कुवेतको महाबुल्ला २ स्थित आप्रवासी कामदार बस्ने अपार्टमेन्ट भवनमा आगलागी हुँदा ज्यान गुमाउने ३ नेपालीको पहिचान खुलेको छ । जसमा दुई घरेलु महिला र एक पुरुष कामदार रहेका छन् । कुवेतस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार मृत्यु हुनेमा सर्लाहीका २९ वर्षीय विजय बैठा, अप्सरा कामी र गौरी दर्जी रहेका छन् । अप्सरा र गौरीको ठेगाना छैन ।...
दक्षिण कोरियामा न्युनतम पारिश्रमिक बढ्यो, हेर्नुहोस् कति बढ्यो ?
काठमाडौं । दक्षिण कोरिया सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको छ । नयाँ पारिश्रमिकअनुसार श्रमिकले सन् २०२० का लागि प्रतिघण्टा ८ हजार ५ सय ९० वन पाउने तलब बृद्धि भएको छ । यस वर्षको न्यूनतम ज्याला प्रतिघण्टा ८ हजार ३ सय ५० वन थियो । यो सँगै कोरियामा कार्यरत करिब ४४ हजार कामदार लाभान्वित भएका छन् । हाल कोरियामा करिब ईपीएसमार्फत् कोरिया...
मलेसियामा अवैधानिक रुपमा बस्ने नेपालीसहित सयौं ब्यक्ति यसरी पक्राउ
क्वालालम्पुर । मलेसियामा अवैधानिक रुपमा बसिरहेका विदेशी पक्राउ गर्ने अभियान अन्तर्गत १ सय २ जना विदेशी पक्राउ परेका छन् । उनीहरुलाई झण्डै ९० ठाउँमा गरिएको खोजतलाशका क्रममा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । अध्यागमन प्रहरीले गरेको खोजतलाशका क्रममा एक हजार भन्दा धेरै व्यक्तिको कागजपत्र हेरिएको प्रहरीले जनाएको छ । निर्माण...
डोनाल्ड ट्रम्पको कारमा कति छन् रहस्यहरु ? पढ्नुहोस्
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कारलाई चलनचल्तीमा ‘द बिस्ट’ भनिन्छ । सो क्याडिलाक बिस्ट लिमोे कार केही समय पहिले सार्वजनिक भएको थियो । सो कार अनेक प्रकारले रहस्यमय रहेको जानकारी मिडियाहरुले दिएका छन् । यही रहस्यका कारण राष्ट्रपति ट्रम्पको बिस्ट कार पुरै विश्वमा चर्चित छ । सो कारमा ८ इन्चको ढोका राखिएको छ, जसको...
अस्ट्रेलियामा न्यूनतम पारिश्रमिक बढ्यो, नेपाली पनि लाभान्वित हुने
एजेन्सी । अस्ट्रेलिया सरकारले मजदुरहरुको न्युनतम पारिश्रमिक तीन प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले अस्टे«ेलियामा रहेका लाखौं आप्रवासीसँगै नेपाली आप्रवासी पनि लाभान्वित हुने भएका छन् । अस्ट्रेलियाको फेयर एन्ड वर्क कमिसनले जुलाई १ बाट लागु हुने गरी पारिश्रमिक वृद्धि गरेको हो । नयाँ वृद्धि पछि अब अस्ट्रेलियाली...